ဆင်ပေါက် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ဆင်ပေါက်
Category Archives: ဆင်ပေါက်
[Released: Nov 10, 2013. Genre: Pop, Rock & Punk. Quality: 192kbps MP3] ၀၁။ အရင်အတိုင်းမင်းလှတယ် ၀၂။ ဒီလိုကလေးရယ် ၀၃။ မနေ့ကချစ်သူ ၀၄။ ပြန်ဆုံတိုင်း ၀၅။ ပြိုင်မျဉ်း ၀၆။ ဘောစေ့ ၀၇။ ပါရမီရှင် ၀၈။ နွေ ၀၉။ ဆန္ဒတစ်စုံတစ်ရာ ၁၀။ အရင်လိုမပျော်ဘူး ၁၁။ ကောင်မလေး ၁၂။ ချစ်သူလိပ်စာ (Bonus Track) [Download Whole Album – 62 MB] (Droplr) [Download Whole Album – 62 MB] (Sharebeast) Password: www.ehlar.com Special … Continue Reading →
November 23, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆင်ပေါက် Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
G Latt ၊ ဆင်ပေါက် ၊ V နိုထွန်း ၀၁ စေ့စပ်လက်စွပ် – Group ၀၂ အမှတ်တရညနေ – G Latt ၀၃ တို့မသိတဲ့ – ဆင်ပေါက် ၀၄ ခွင့်လွှတ်တယ် – V နိုထွန်း ၀၅ အလှဆုံးနေ့ – G Latt ၀၆ မျက်နှာများတယ် – V နိုထွန်း ၀၇ ပြောပြချင်တယ် – ဆင်ပေါက် ၀၈ ငါသေသည်အထိ – V နိုထွန်း ၀၉ ဘေးထွက်စိတ် – G Latt ၁၀ မင်းဘက်ကသူငယ်ချင်း – ဆင်ပေါက် ၁၁ စေ့စပ်လက်စွပ် … Continue Reading →
January 18, 2011 swordfish ဂျီလတ် ဆင်ပေါက် Vနိုထွန်း9Comments
ဆင်ပေါက် – အကြည့်တစ်ချက်
၀၁။ ရွှေခြေကျင်းမြို့တော် ၀၂။ တို့ကတော့ ချစ်ပစ်ချင်ပြီ ၀၃။ ခွင့်လွှတ်နိုင်မလား ၀၄။ အကြည့်တစ်ချက် ၀၅။ သံသယစိတ် ၀၆။ ဆွေး ၀၇။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ် ၀၈။ အင်းယားသုိ့ ၀၉။ အဖြေ ၁၀။ လူတော့လူ ၁၁။ ကျွန်တော်နှင့်ညီမလေးများ ၁၂။ ထာဝရ မ ၁၃။ သဝေထိုးကကြီးရေခြကသတ်ကောက် ၁၄။ သို့ credit to: Jonesein (Myanmar Cupid Forum)
August 5, 2008 mgtaryar အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆင်ပေါက် New Myanmar Albums 18 Comments
ဆင်ပေါက် – ပင်လယ်ပျော်
LOSO သီချင်းများစုစည်းမှု ၁။ ပင်လယ်ပျော် ၂။ လူနုံကြီး ၃။ မီုးစက်များရဲ့အောက် ၄။ အလွမ်းရိပ်မိသူ ၅။ ပြန်ဆုံချိန်မှ ၆။ ကျွန်တော်နဲ့မြို့ငယ်လေး ၇။ Happy Birthday ၈။ မင်းကိုယ်စား ၉။ ထားလိုက်တော့ ၁၀။ ပြောင်းလဲနေသော ၁၁။ ပေးပစ်လိုက်မယ် ၁၂။ အမေ(ငှက်ကလေးရဲ့အမေ)
May 26, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆင်ပေါက် 11 Comments
ဆင်ပေါက် – ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဗီဇ
၁။ ယောက်ခြောက်ဆယ် ၂။ မင်းတစ်ယောက်တည်း ၃။ ဒုက္ခ ၄။ ဗီဇနဲ့ဖြစ်တည်ခြင်း ၅။ အတတ်စူး ၆။ ပြင်ဆင်ချိန် ၇။ ရုပ်ဆိုးလေး ၈။ အမှန်နှင့်အမှား ၉။ မျက်စေ့သူငယ် နားသူငယ် ၁၀။ ဟီးရိုး ၁၁။ အတိတ် ၁၂။ စနေနေ့ည ၁၂ နာရီ
February 23, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ဆင်ပေါက်4Comments